Ka ọtụtụ ndị mmadụ, gụnyere m, kọntaktị na-ihe kasị mkpa na m ga-ekwesịghị ịdị n'ihi na n'eziokwu, ọtụtụ n'ime anyị na-adịghị n'aka otú anyị na-aga ịhụ ha ọzọ ma ọ bụrụ mgbe anyị furu efu ha.
Ekele technology, nke a nke e kpebiri na enyemaka nke backups, nke ọ bụghị nanị nyeere anyị aka ịnọgide na anyị onwe data nchebe, ma ọ nyekwaara anyị na migrating site na otu smartphone ọzọ, nke na-emekarị na-eme ugboro abụọ n'afọ, ọ dịkarịa ala. Isiokwu a bụ ihe niile na-iPhone ọrụ ndị na-adịghị maara nke otú ndabere ha na kọntaktị na anyị na-aga ghọtakwuo ihe ụfọdụ nke Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ ulo-ikwū-site Mee ọrụ.
Ime iTunes ndabere kọntaktị?
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ajụjụ na ndị mmadụ na-arịọ nile internet na ọ bụ pụtara mgbagwoju anya n'ihi na Apple na mgbe nile na-agbakwunye ọhụrụ atụmatụ na yiri aha dochie yiri atụmatụ na wee tinyere iTunes ibido.
Ee, ị pụrụ ndabere kọntaktị gị na iTunes site na isoro ole na ole dị mfe nzọụkwụ. M ukwuu nwere ike ikwu niile ibe iPhones na iPad ọrụ na-ndabere ha ọmụma na iTunes, karịsịa, kọntaktị nke mere na ha na otu ebe. Ozugbo ị kwadoo kọntaktị gị na iTunes ị ga-agaghị abịara nsogbu na-ha azụ ma ọ bụrụ na ị na-ama ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ imelite gị ama ma ọ bụ mbadamba ngwaọrụ n'ime a ọhụrụ otu.
Ndị na-esonụ na-egosi foto atụmatụ ị nwere aka na iTunes, iji ndabere kọntaktị gị.
Olee otú ndabere iPhone kọntaktị iji Wondershare MobileTrans
A ọtụtụ ndị ga-achọ ịmata banyere ebe ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ software ike ga-eji maka nzube nke akwado kọntaktị. E nwere ihe mere dị ka ihe mere iTunes nwere ike ghara ịbụ ndị kacha oke maka ọtụtụ iPhone ọrụ. Na iTunes dịghị mgbe ị ga-enwe ike ịhụ na kọntaktị, kama ị ga-ndabere ha ruo otu iPhone ma ọ bụ onye iPad ma na-ele ha site na Ndi ana-akpo ma ọ bụ ekwentị ngwa.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere otú a ngwa ga na-eri, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe obi ụtọ ịmata na Wondershare MobileTrans ga-ọbụna na-eri a dime. Ndị na-esonụ na-egosi foto a stepwise obibia kwupụta akwado kọntaktị gị n'iji Wondershare.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye ngwa n'ihi na gị Windows ma ọ bụ Mac.
Nzọụkwụ 2. Mgbe wụnye ngwa jidesie gị PC ị ga-egosipụta na ihuenyo na ndị na-esonụ interface Mgbe ejikọta gị ama ka PC na iji eriri USB. Pịa na "ndabere gị ekwentị" button.
Nzọụkwụ 3. Tinye akà rà checkbox megide Ndi ana-akpo ma họrọ Malite Detuo.
Nzọụkwụ 4. The ngwa ga-amalite-akwado ihe kọntaktị tinyere ihe megide onye ọ bụla kọntaktị. Ozugbo usoro bụ zuru ezu ị ga-egosipụta na a ozi si, ị ọma kwadoo kọntaktị gị.
Top 3 iOS égwu nkwado ndabere na mpaghara Ndi ana-akpo
Ihe kasị mma banyere inwe a smartphone si Apple bụ na ị ga-esi na-ekpebi na ọtụtụ ngwa ma bulie onye na nke kacha mma atụmatụ. Atụmatụ, na-adabara gị chọrọ. Na-esonụ bụ nke 3 nke kasị mma ngwa na anyị na-eche onye ọ bụla kwesịrị lelee iji bulie otu nke kasị mma n'ime ha.
My Ndi ana-akpo ndabere Pro
Site GLOBIL Informatics
Download njikọ: https://itunes.apple.com/us/app/my-contacts-backup-pro/id466388978?mt=8
My Ndi ana-akpo Back Up Pro-ahapụ gị ịhọrọ n'etiti eke a ndabere nke dị iche iche, gụnyere, vCard ma ọ bụ CSV (Excel) usoro. Inwe ihe nhọrọ nke ị na-ahọrọ si dị iche iche formats ahapụ ndị na-ọrụ ndị ga-chọrọ nyefee ha kọntaktị n'ime ngwaọrụ ọzọ ma ọ bụ ọzọ ngwa dị mfe dị ka ọ nwere ike inwe.
Ọzọ dị ịtụnanya atụmatụ n'ime a iOS ngwa bụ ikike n'ihi na onye ọrụ bulite ha kọntaktị ozugbo na Dropbox. Nke a a pụtara obere atụmatụ na nanị ihe m nke a n'anya.
Ọzọkwa, ngwa na-echetara gị banyere akwado gị kọntaktsị na a kwa izu site Obodo ncheta. Nke mere na, ị mgbe uche a ohere nke-eme ka elu ozi gị.
Ndi ana-akpo ndabere N'ime Dropbox Lite
Site Paul Kanzelsberger
Download njikọ: https://itunes.apple.com/us/app/contacts-backup-to-dropbox/id528225745?mt=8
Dị ka aha na-atụ aro, ngwa Akwadoo elu kọntaktị gị na Dropbox. Ngwa-enye a nnọọ ogologo-atụ atụmatụ na okwu nke functionalities, ma na nke a nanị enyeworo n'inyere ngwa na ndị niile ama na ọ ka na-ya. Ndị ga-achọ igbochi ole na ole mbipụta nke ha kọntaktsị na Dropbox ga n'anya na iji ngwa.
Ndabere Ndi ana-akpo - Easy ndabere
Download njikọ: https://itunes.apple.com/pk/app/easy-backup-my-contacts-backup/id545198169?mt=8
Easy ndabere bụ ihe iOS ngwa na-ewe niile kọntaktsị na gị ama, gụnyere ndị na iCloud, Facebook, Twitter na Akwadoo ha jidesie a VCF ma ọ bụ a kaadị usoro. Ngwa ga-mgbe ahụ, ka ị na-ahọrọ si, ma ị chọrọ echekwa kọntaktsị na ngwaọrụ gị ma ọ mbupụ ha site email. A nnọọ uru na oru oma ngwa maka nzube nke wetere a dị ọcha ndabere kọntaktị gị.
> Resource> iTunes> Ò iTunes ndabere Ndi ana-akpo?